China Plastic jekiseni muchina Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Mestech yakagadzirirwa 30 mapurasitiki jekiseni Kuumbwa michinakubva pamatani zana kusvika kumatoni mazana mashanu uye gumi vane ruzivo rwekushanda. Tinogona kupa zvigadzirwa zvejekiseni zvigadzirwa zvehukuru hwakasiyana kune vatengi vedu
Plastic jekiseni muchina inonziwo jekiseni Kuumbwa muchina kana jekiseni muchina. Ndiyo huru yekuumba michina inoita thermoplastic kana thermosetting mapurasitiki muzvigadzirwa zvepurasitiki zvemhando dzakasiyana vachishandisa mapurasitiki ekuumba. Mabasa epurasitiki jekiseni kuumbwa muchina ndeekupisa mapurasitiki, shandisa yakanyanya kumanikidza kune yakanyungudika mapurasitiki, uye ovaita kuti vapfure kunze uye vazadze chakuvhe mhango.
I-Iko kupatsanura kwepurasitiki jekiseni kuumbwa muchina Pulasitiki jekiseni kuumbwa muchina unokwanisa kuumba epurasitiki zvigadzirwa neyakaoma chitarisiko, chaiyo chaiyo saizi kana gobvu dhizaini nesimbi inoisa panguva imwechete. Inoshandiswa zvakanyanya mukudzivirira kwenyika, electromechanical, mota, zvifambiso, zvekuvaka, kurongedza, kurima, tsika nemagariro, dzidzo, hutano uye hupenyu hwevanhu hwezuva nezuva. With kukurumidza kukura mapurasitiki indasitiri uye kunzwisisa mamiriro uye mashandiro ari Kuumbwa zvigadzirwa, dzakasiyana uye nokurondedzerwa jekiseni Kuumbwa michina zvakagadzirwa zvinoenderana. Zvinoenderana neiyo chaiyo yezvigadzirwa zvakagadzirwa, michina yejekiseni inogona kukamurwa kuita zvakajairika uye nemazvo jekiseni kuumbwa michina. Zvinoenderana nesimba uye nekudzora system, jekiseni muchina unogona kukamurwa kuita hydraulic uye ese emagetsi jekiseni kuumbwa michina. Maererano STRUCTURAL chimiro jekiseni Kuumbwa muchina, pane matatu marudzi: kutwasuka uye yakatwasuka (kusanganisira maviri ruvara jekiseni Kuumbwa muchina) uye kona mhando.
Nhanganyaya kune hunhu hwakasiyana jekiseni kuumbwa michina
5. Iyo yakajairika mold-yekuvharira chishandiso yakavhurika yakatenderedza, zviri nyore kugadzirisa ese marudzi ezvigadzirwa zve otomatiki, inokodzera yakaoma, zvigadzirwa zvehunyanzvi zve otomatiki kuumbwa.
6. bhandi rekutakura bhanhire riri nyore kuona iyo yepakati yekumisikidza kuburikidza neforoma, kuti igadzirise otomatiki kugadzirwa.
7.Iyo iri nyore kuve nechokwadi kuenderana kweinobuda kuyerera uye kuumbwa tembiricha yekuparadzira muforoma.
8. Yakashongedzerwa netafura inotenderera, tafura inofamba uye tafura yakakombamira, zviri nyore kuona kuisa kuumbwa uye kufa kusanganisa kuumbwa.
9. diki batch mangoda kutengeswa kugadzirwa, chakuvhuvhu mamiriro ari nyore, yakaderera mutengo, uye nyore uninstall.
10. yakatwasuka muchina nekuda kwenzvimbo yepasi yegiravhiti.
1.Horizontal jekiseni Kuumbwa muchina
1. kunyangwe iyo mainframe yakadzikira nekuda kwayo yakaderera fuselage, hapana kureba kukwirira pane chirimwa.
2.chigadzirwa chinogona kuwira otomatiki, pasina kushandisa kwemaoko ruoko, otomatiki kuumbwa kunogona kuwanikwa.
3.bece yakaderera fuselage, iri nyore kudyisa, nyore kugadzirisa.
4.mold inofanirwa kuiswa necrane.
5.multiple yakafanana kurongeka, icho chakaumbwa chigadzirwa chiri nyore kutora uye kurongedza kubva kune yekufambisa bhandi.
2.Vertical jekiseni Kuumbwa muchina
1. jekiseni chishandiso uye chinosunga chirafu chiri pane imwechete yakatwasuka yepakati, uye kufa kunovhurwa nekuvharwa pamwe neepamusoro uye ezasi mafambiro. Iyo nzvimbo yepasi inongova ingangoita hafu yemuchina wakakombama, saka shanduko yacho munzvimbo yekugadzira ingangoita kaviri kugadzirwa.
2. nyore kuzadzisa muwedzero Kuumbwa. Nekuti iyo yekufa nzvimbo iri kumusoro, iyo inoisa iri nyore kuwana. The otomatiki muwedzero Kuumbwa zvinogona nyore kuziva nekutora mhando yemuchina ine yakaderera template yakagadziriswa uye yepamusoro template inofambiswa uye musanganiswa weiyo
bhandi rekutakurisa uye maneja.
3. Kurema kwefa kunovhurwa nekuvharwa kumusoro uye pasi nerutsigiro rweiyo yakatwasuka formwork. Icho chiitiko chekuti formwork haigone kuvhurwa uye kuvharwa nekuda kwekumberi inversion inokonzerwa nekukomba kweiyo kufa yakafanana neye yakatwasuka muchina hakuzoitika. Inobatsira kuchengetedza kurongeka kwemichina uye kufa.
4. Nesimba manipulator, yega yega yeplastiki mhango inogona kubviswa, inoenderana nemazvo kuumbwa.
3.Double jekiseni Kuumbwa muchina
Inogona-imwe-nguva jekiseni kuumbwa maviri mavara ejekiseni kuumbwa muchina, inogona kusangana nevatengi zvinodikanwa pakuonekwa, vashandisi vanogona kushandisa chigadzirwa kugadzikana.
4.All yemagetsi jekiseni Kuumbwa muchina
All-yemagetsi jekiseni Kuumbwa muchina haugone chete kusangana nezvinodiwa zvekushandisa, asi zvakare kune zvakawanda zvakanakira kupfuura zvakajairwa jekiseni kuumbwa muchina.
Imwe mukana weyese-yemagetsi jekiseni kuumbwa muchina ndeyekuti inoderedza ruzha, iyo isingangobatsire vashandi chete, asi zvakare inoderedza kudyara mune inonzwika-proof yekugadzira zvirimwa.
5.Angle jekiseni Kuumbwa muchina
The akabatana jekiseni sikuruwa pamusoro angled jekiseni Kuumbwa muchina iri perpendicular kune inofamba akabatana kuti clamping mashandiro template, uye zvayakanakira nezvayakaipira zviri pakati wehunyambiri uye zvido zvevanhu. Nekuti iyo jekiseni nhungamiro uye chakuvhuvhu chakaparadzaniswa pamusoro chiri pane imwe ndege, iyo angular jekiseni kuumbwa muchina wakakodzera maforoma ane asymmetrical geometry yepamusuwo gedhi kana zvigadzirwa zvine yavo yekuumba nzvimbo haibvumiri gedhi mamaki.
6.Multi chiteshi kuumbwa muchina
Iyo jekiseni chishandiso uye yekuchinjisa mudziyo ine maviri kana anopfuura ekushandira nzvimbo, uye jekiseni chishandiso uye iyo yekuchinjisa mudziyo inogona kurongedzwa nenzira dzakasiyana.
Parizvino, matatu mhando jekiseni Kuumbwa michina anoshandiswa zvakanyanya:
Horizontal jekiseni Kuumbwa muchina unoshandiswa zvakanyanya nekuda kwayo diki nzvimbo, inyore kumisikidza uye yakafara application renji. Double jekiseni Kuumbwa michina inowanzoshandiswa kuisa chisimbiso uye kudzivirira mvura zvinodiwa zvemagetsi zvigadzirwa, kuvhunduka buffering magetsi maturusi, uye zvigadzirwa zvine akasiyana mavara uye compact mamiriro. Yese-yemagetsi jekiseni Kuumbwa muchina unoshandiswa mukugadzira hombe maodha, yakakwira kunyatsoita diki nepakati-saizi zvikamu.
II-sei epurasitiki jekiseni Kuumbwa michina inoshanda?
Anoshanda musimboti jekiseni Kuumbwa muchina wakafanana neiyo jekiseni jekiseni. Iyi nzira yekugadzira jekiseni repurasitiki yakanyungudutswa (kureva kuyerera kunoyerera) mukati mevhu rakavharwa nenzira yekukanda kweiyo screw (kana plunger) uye kuwana chigadzirwa mushure mekurapa.
Jekiseni Kuumbwa chinhu cyclic maitiro, yega yega kutenderera inonyanya kusanganisira:
Kudya kwehuwandu - kunyungudika plasticization - kumanikidza jekiseni - kutonhora - kuvhura chakuvhe uye kutora zvikamu. Bvisa zvikamu zvepurasitiki uye wobva wavhara fomu yeiyo inotevera kutenderera.
Jekiseni Kuumbwa muchina mashandiro zvinhu: jekiseni Kuumbwa muchina mashandiro zvinhu zvinosanganisira kudzora kiibhodhi mashandiro, emagetsi kudzora system mashandiro uye hydraulic system mashandiro ezvinhu matatu. Kusarudzwa kwejekiseni kuita chiito, kudyisa chiito, jekiseni kumanikidza, jekiseni kumhanyisa, ejection mhando, tembiricha yekutarisa chikamu chimwe nechimwe chebhari, jekiseni kumanikidza uye kumashure kumanikidzwa kugadzirisa kwakaitwa zvichiteerana.
Iyo yakajairika yekuumba maitiro eiyo screw jekiseni kuumbwa muchina ndeyekuti: chekutanga, iyo granular kana poda mapurasitiki inowedzerwa mumudziyo, uye plastiki inonyungudika nekutenderera kweiyo sikuru uye kudziya kwedhiramu rekunze madziro. Ipapo muchina unogadzira chakuvhe uye chigaro chejekiseni chichienda kumberi, kuitira kuti kamwene iri padyo negedhi reforoma, uye ipapo mafuta ekumanikidza anodururwa mujecha rejekiseni kuti riite sikuru. Iyo shamhu inosundirwa kumberi kuitira kuti iyo yakanyunguduka ijoikwe mune yakavharwa kufa ine yakaderera tembiricha pakakwirira kumanikidza uye kumhanya kumhanya. Mushure meimwe nguva yenguva uye kumanikidza kubata (inozivikanwawo sekubata kumanikidza) uye kutonhora, iyo melt inosimbiswa uye kuumbwa, uye icho chigadzirwa chinogona kutorwa kunze (chinangwa chekubata kumanikidza ndechekudzivirira iyo Reflux yekunyungudika mukati mevhu Uye kupa icho chigadzirwa kune iyo mhango. Uye ita shuwa kuti chigadzirwa chine kumwe kuonda uye kuenzana mamirioni. Izvo zvakakosha zvinodiwa zvejekiseni kuumbwa ndeye plasticization, jekiseni uye kuumbwa. Plasticization ndiyo fungidziro yekuwana uye kuverengera mhando yezvigadzirwa zvekuumba, uye Kuti usangane nezvinodiwa pakuumba, jekiseni rinofanira kuona kumanikidza nekumhanyisa panguva imwe chete, nekuti jekiseni rekumanikidza rakakwira kwazvo, rinoenderana nekumanikidza kwakanyanya mudumbu (avhareji kumanikidza mudumbu kunowanzo pakati pe20 ne45. MPa), saka panofanirwa kuve nekukwana simba rekumanikidza.Inowonekwa kuti jekiseni chishandiso uye yekuchinjisa mudziyo ndizvo zvakakosha zvikamu zvejekiseni muchina wekuumba muchina.
Kuongororwa kwezvigadzirwa zvepurasitiki zvinonyanya kusanganisira zvinhu zvitatu: yekutanga mhando yemhando, kusanganisira kutendeka, ruvara, kubwinya, nezvimwe. yechipiri iko kurongeka pakati pehukuru nenzvimbo ine hukama; chechitatu chimiro chemuviri, chemakemikari nemagetsi zvinoenderana nekushandiswa. Izvi zvinodiwa zvemhando dzakasiyana zvakare zvinoenderana nenguva dzakasiyana dzezvigadzirwa. Izvo zvakashata zvezvigadzirwa zvinonyanya kuve mune dhizaini, kunyatsoita uye kupfeka degree reiyo fomu. Asi pachokwadi, ivo varapi vari mupurasitiki yekugadzirisa chirimwa kazhinji vanotambura nemamiriro akaoma ekushandisa matekinoroji ekugadzirisa matambudziko anokonzerwa nehurema hwehuvhu uye ane mashoma maitiro.
Iko kugadzirisa kwemaitiro ndiyo nzira inodikanwa yekuvandudza mhando uye kubuda kwezvigadzirwa. Nekuti iyo jekiseni kutenderera pachayo ipfupi,
kana mamiriro ezvinhu asina kunyatso kudzorwa, zvigadzirwa zvemarara zvinoyerera zvichiramba. Paunenge uchigadzirisa maitiro, zvakanakisa kuchinja chete mamiriro ezvinhu panguva uye uchizviona kakawanda. Kana kumanikidza, tembiricha uye nguva zvakabatana uye zvikagadziriswa, zviri nyore kukonzera nyonganiso nekusanzwisisana. Kune nzira dzakawanda uye nzira dzekugadzirisa maitiro. Semuenzaniso, pane zvinopfuura gumi zvingagadziriswa kuchinetso chejekiseni risingagutsi rezvigadzirwa. Chete nekusarudza imwe kana maviri makuru mhinduro kugadzirisa crux yedambudziko ndipo patinogona kugadzirisa dambudziko. Uye zvakare, isu tinofanirwa zvakare kuteerera kune iyo dialectical hukama mune mhinduro. Semuenzaniso: chigadzirwa chine kushushikana, dzimwe nguva kukwidziridza tembiricha yezvinhu, dzimwe nguva kudzikisira tembiricha yezvinhu; dzimwe nguva kuwedzera huwandu hwezvinhu, dzimwe nguva kudzikisa huwandu hwezvinhu. Bvuma kugona kwekugadzirisa dambudziko nedanho rekudzora.
III-Huru hwokugadzira parameter ejekiseni kuumbwa muchina ari
Kuvhara simba, yakanyanya jekiseni vhoriyamu, huwandu uye hushoma kufa kukora, chakuchinja chinja sitiroko, chinhambwe pakati pekudhonza matanda, ejection sitiroko uye ejection kumanikidza, nezvimwe.
Unyanzvi zvinodiwa zvejekiseni michina yekuumba inokodzera zvigadzirwa zvekuumba zvinogona kusarudzwa seinotevera:
1 Clamping simba: chigadzirwa fungidziro nzvimbo yakawedzeredzwa neforoma mhino kumanikidza isingasviki yekumanikidza simba, P yakaenzana kana yakaenzana neQF mhango yekumanikidza;
2 Maximum jekiseni vhoriyamu: chigadzirwa uremu <yakanyanya jekiseni vhoriyamu. Chigadzirwa chehuremu = yakakwira jekiseni vhoriyamu * 75 ~ 85%.
3 jekiseni Kuumbwa muchina muforoma ukobvu: iyo nguva pakati yakanyanya uye shoma kukosha yejekiseni jekiseni muchina uye maviri mapoinzi. Mould kunonyanyisa ukobvu jekiseni Kuumbwa muchina kushoma pane yakanyanya muforoma ukobvu mold. Hushoma ukobvu hwakaenzana neiyo diki yeforoma ukobvu wejekiseni Kuumbwa muchina.
4 Mould sitiroko: muforoma kuvhura daro = muforoma ukobvu + chigadzirwa kukwirira + ejection chinhambwe + chigadzirwa nzvimbo. Ndokureva, muforoma-muforoma chinhambwe.
5 Iyo nhambwe iri pakati pematanda: ndiko kuisa nzvimbo yekuumba; kureba kweforoma * upamhi kwakaderera pane dhonza dhamu kureba.
6 Ejection sitiroko uye kumanikidzwa: chigadzirwa ejection chinhambwe uye kumanikidza <ejection sitiroko uye kumanikidzwa kwejekiseni Kuumbwa muchina.
Sisitimu uye kuumbwa kweiyo jekiseni muchina
Jekiseni Kuumbwa muchina kazhinji kunosanganisira jekiseni system, chakuvhuvha yekuvhara system, hydraulic kufambisa system, yemagetsi kudzora system, lubrication system, kudziyisa uye kutonhora system, chengetedzo yekutarisa system uye zvichingodaro.
Basa rejekiseni system: Jekiseni system ndeimwe yezvinonyanya kukosha zvikamu zvejekiseni jekiseni muchina, kazhinji kune matatu makuru mafomu plunger, sikuruu, sikuruwa-wepurasitiki plunger jekiseni. Rudzi runonyanya kushandiswa is screw. Basa rayo kuisa jekiseni repurasitiki muforoma mhango nekukanda pasi peimwe kumanikidza uye nekumhanya mushure mekumesa imwe chiyero chemapurasitiki mune yakatarwa nguva mukutenderera kwemuchina wejekiseni. Mushure mejekiseni, iyo yakanyunguduka yakajowa muforoma mhango inochengetwa muchimiro.
Iyo jekiseni sisitimu inoumbwa neplasticizing chishandiso uye simba rekuchinjisa mudziyo.
Iyo plasticizing chishandiso che screw jekiseni kuumbwa muchina unonyanya kuverengerwa wekudyisa chishandiso, dhiramu, sikuruu, glue inopfuura chikamu uye kamwene. Chishandiso chekufambisa simba chinosanganisira jekiseni rejekiseni, humburumbira inofamba yechigaro chejekiseni uye sikuruji dhiraivhu (a
Mould clamping maitiro
Basa re clamping system: mashandiro e clamping system ndeyekusimbisa kuvhara chakuvhe, kuvhura uye kurasa zvigadzirwa. Panguva imwecheteyo, mushure mekuvharwa kweforoma, simba rekuchinjisa rinopihwa kuti ridzivise kumanikidzwa kweforoma mhango inokonzerwa nepurasitiki yakanyungudika inopinda muforoma mhango, uye musono weforoma unodzivirirwa, zvichikonzera mamiriro akaipa ezvigadzirwa.
Kuumbwa kweiyo clamping system: iyo yekuchinjisa sisitimu inowanzo kuvezwa yekuchinjisa chishandiso, yakaturika mashandiro, kugadzirisa mashandiro, kurasa mashandiro, kumberi uye kumashure yakatarwa template, inofamba template, yekukochekera humburumbira uye yekuchengetedza chengetedzo mashandiro.
Basa reiyo hydraulic kufambisa sisitimu ndeyekupa simba yeiyo jekiseni kuumbwa muchina zvinoenderana nezviito zvakasiyana zvinodikanwa nemaitiro, uye kuzadzikisa zvinodikanwa zvekumanikidza, kumhanya uye tembiricha inodiwa nezvikamu zvakasiyana zveiyo jekiseni Kuumbwa muchina. Inonyanya kuve inoumbwa neakasiyana hydraulic zvinoriumba uye e hydraulic anobatsira eiri, mune iyo pombi yemafuta uye mota ndiyo sosi sosi yejekiseni muchina wekuumba muchina. Mavharuvhu akasiyana siyana anodzora kumanikidzwa kwemafuta uye kuyerera, kuitira kuti zvidikanwe zvejekiseni.
Kufambidzana kunonzwisisika pakati pemagetsi ekudzora system uye iyo hydraulic system inogona kuona maitiro anodikanwa (kumanikidza, tembiricha, kumhanya, nguva) uye akasiyana maitiro ezviitiko zveiyo jekiseni muchina. Inonyanya kuve inoumbwa nemidziyo yemagetsi, zvemagetsi zvigadzirwa, zviridzwa (ona pazasi kurudyi), hita, sensors zvichingodaro. Kazhinji, pane nzira ina dzekutonga, zvinyorwa, semi-otomatiki, otomatiki uye akagadziridzwa.
Kuchenesa / kutonhora system
Iyo yekupisa sisitimu inoshandiswa kupisa iyo dhiramu uye jekiseni kamwene. Bhagi remuchina wekujekesa jekiseni rinowanzoshandisa iyo yekupisa yemagetsi coil semudziyo wekupisa, unoiswa kunze kwedhiramu uye wakakamurwa ne thermocouple. Kupisa kupisa kupisa kwezvinhu zvepurasitiki kuburikidza nehubhu rusvingo kupisa conduction; kutonhora system inowanzo shandiswa kutonhodza tembiricha yemafuta, yakanyanya mafuta tembiricha inokonzeresa akasiyana zvikanganiso, saka mafuta tembiricha inofanirwa kudzorwa. Iyo imwe nzvimbo inotonhorera iri padyo nekubuditsa chiteshi chepombi yekudzivirira kudzivirira iyo mbishi kuti isanyungudike pachiteshi chekubuda, zvichikonzera kuti iyo mbishi isakwanise kupihwa zvakanaka.
Lubrication system idunhu rinopa lubrication mamiriro eiyo hama inofamba zvikamu zvejekiseni muchina wekuumba, senge yekufambisa template, kugadzirisa mudziyo, kubatanidza tsvimbo hinge netafura yekupfura, kuitira kudzikisa kushandiswa kwesimba uye kugadzirisa hupenyu hwenzvimbo. Lubrication inogona kuve yekushandisa lubrication nguva nenguva kana otomatiki emagetsi lubrication.
Kuchengetedza kuongorora system
Iyo yekuchengetedza chishandiso chejekiseni yekuumba muchina inowanzoshandiswa kuchengetedza vanhu uye michina chengetedzo zvigadzirwa. Kunyanya nemusuwo wekuchengetedza, kuchengeteka kunetseka, hydraulic vharuvhu, switch switch, photoelectric yekuona zvikamu uye zvimwe zvikamu, kuti uwane magetsi - Mechiniki - hydraulic inopiringidza dziviriro.
Iyo yekutarisa sisitimu inonyanya kuongorora tembiricha yemafuta, tembiricha yezvinhu, kuwandisa system, maitiro uye kukundikana kwemushini jekiseni kuumbwa muchina, uye inoratidza kana kuzivisa mamiriro asina kujairika.
Mestech yakagadzirirwa 30 seti jekiseni kuumbwa muchina unofukidza matani 100 kusvika kumatoni 1500, tinogona kugadzira chigadzirwa chepurasitiki kubva pa0.50 magiramu kusvika ku5 kg yemapurasitiki zvikamu zvehukuru hwakasiyana. Kana uine zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoda jekiseni kuumbwa, ndapota taura nesu
Pashure: Kugadzira kwepurasitiki sirinji
Zvadaro: Double jekiseni Kuumbwa
Plastiki musoro goko re robot
Audio mutauri wepurasitiki pekugara
Vhidhiyo foni foni yepurasitiki yakavharirwa
Plastiki chimbuzi chigaro chakuvhuvhu
Kudhindwa kwesilkscreen uye kushongedza kwepateni kwe ...
Dzimba dzePurasitiki dzemagetsi inverter